အအိပ်နည်းရင် ဝတက်သတဲ့ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အအိပ်နည်းရင် ဝတက်သတဲ့ ….
အအိပ်နည်းရင် ဝတက်သတဲ့ ….
Posted by onlinezz on Jul 21, 2010 in Health & Fitness |0comments
ပိန်သွားအောင်အိပ်တာလားလို့အမေးခံရရင် မအိပ်တက်ဘူးလို့ ပဲ ဖြေကြမှာပါ။သို့ ပေမယ့် ဟားဗက်ဆေးတက္ကသိုလ်က အမျိုးသမီးပေါင်း ၆၈,၀၀၀ ကိုလေ့လာထားတဲ့ သုတေသနတစ်ခုက အံ့အားသင့်ဖွယ် ရလဒ်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။တစ်ရက်ကို ၅ နာရီပဲ အိပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရနာရီ နဲ့ အထက် အိပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်ယှဉ်ရင် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ပေါင် ၃၀ တက်လာဖို့၃၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်
လို့ဆိုပါတယ်။ယေဘုရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်ယာကထပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူက အိပ်နေတဲ့သူထက် ကယ်လိုရီ ပိုသုံးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနေတာကပိန်စေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ၁၆ နှစ်ကြာပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာမှုက အချိန်ပိုပြီးအိပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ များများစားရင်တောင် အအိပ်နည်းတဲ့သူတွေလောက် ကိုယ်အလေးချိန်မတက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အိပ်ချိန်ပိုများတဲ့ အုပ်စုက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား မှုနည်းမယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သုတေသနပညာရှင်တွေပြောတာက အိပ်ချိန်အနည်းငယ်သာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အစားအစာမှာပါတဲ့ ကယ်လိုရီကို ချေဖျက်နိုင်မှုမှာ ကောင်းကောင်းအနားယူတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် အားနည်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်သူကမှတော့ အသေအချာမပြောနိုင်ပါဘူး။
အိပ်ချိန်မလျှော့ခင် ၂ ကြိမ်ပြန်စဉ်းစားဖို့ တော့ လိုပါတယ်။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ရေရှည်မှာ ဝလာနိုင်လို့ပါ။